ज्ञानेन्द्र शाही टीमको असली रुपः नर्सिङ लाइसेन्स लिकालिदिने भन्दै लाख रकम असुली – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/ज्ञानेन्द्र शाही टीमको असली रुपः नर्सिङ लाइसेन्स लिकालिदिने भन्दै लाख रकम असुली
भ्र’ष्टाचारवि’रुद्धको अभियानमा लागेको भनिएका ज्ञानेन्द्र शाही टीमको असली रुप उदांगो भएको छ । उनले जसरी बाहिरी प्रचार भ्रष्टा’चार वि’रोधी अभियान भनेका छन्, त्यसको ठीक विपरित काम गर्ने गरेको खुलासा भएको छ । हाम्रो नेपाल, हामी नेपालीका संयोजकसमेत रहेका ज्ञानेन्द्र शाहीकै टीमका अभियन्ताले भने नर्सिङ लाइसेन्सका लागि परीक्षा पास गरिदिन्छु भन्दै रकम लिएको खुलेको छ ।
ज्ञानेन्द्रका अभियन्ता जिता बरालले नर्सिङ परीक्षा उत्तीर्ण गरिदिने भन्दै रकम लिएको रहस्य खुलेको हो । ती विद्यार्थी र जिताबीच भएको फेसबुक च्याट सम्वाद यस्तो छ ।
यस्तो छ फेसबुक च्याट–
विद्यार्थी– एनएनसी जसरी पास गरिदिनु दिदी मैले गर्ने गरेकी छु ।जिता– म बाहिर भ्र’ष्टाचार अभियानमा लागेकी छु । तिम्रो गर्दिन्छु बहिनी
विद्यार्थी– अलि घटाइदिनु हुने थियो कि पैसा, पास जसरी गर्नु छ, दुई वर्ष भइसको, पास जसरी गर्नु छ ।
जिता– सबै कुरा गो’प्य राख्नु बहिनी पेशागतबाट अस्ति म प्रतिनिधि उठेमि हुँ जसरी गर्दिन्छु एनएनसी पास तर पैसा तीन लाखभन्दा कम हुन्न ।
विद्यार्थी– ल ल दिदी हुन्छ, गो’प्य राख्छु पैसा अलि घटाइदिनु न, दुई लाख ५० सम्म हुन्न र ?
जिता– हुँदैन बहिनी तीन लाख नै दिनुपर्छ २४औं लाइसेन्स हो क’डा छ, जसरी पास गर्दिन्छु ।
विद्यार्थी– हुन्छ दिदी म पठाइदिन्छु २ लाख अहिले आइएमइ पुग्न लागिसके, फोनमा बोलम है दिदी । सूचना-प्रबिधि
यति सम्वादपछि जिता बरालले आफ्नो डिटेल पठाएकी छन् ।
जिता– जिता बराल
फोन नम्बर : ९८५६०३०२५६
विद्यार्थी– हस दिदी आइएमइ लाइनमा छु जिता– हुन्छ बहिनी विद्यार्थी– पैसा हालिसकेँ दिदी हैजिता– हुन्छ बहिनी आइएमइ नम्बर कति हो ?
विद्यार्थी– ७१३४६७८९७ डी, ७१२३८७६७५६डी, टु लाख ५० हजार हालिदिएकी छुजिता– हस बहिनी ५० कहिले हाल्दिन्छौंविद्यार्थी– ५० रिजल्टपछि है दिदी ।
जिताले विद्यार्थीको पीडा बुझेर पास गरिदिनु खोजेको भन्दै धेरैपटक सबै गोप्य राख्नु भनेकी छन् । आधा पैसा भने रजिष्टार विन्दाले खाने र आधा पैसा अरु ठाउँ खर्च हुने भनेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा यो तथ्य बाहिर आएपछि ज्ञानेन्द्र शाहीले हिजो फेसबुकमा यस्तो लेखेका छन्, ‘हाम्रो नेपाल,हामी नेपाली का अभियान्ता जिता बराल ज्यू को अगुवाइमा एक जना बहिनि को जिन्दगी बर्बाद गर्ने मानिसलाई कानुनी कारर्बाहि गरिदै।
रकम लिने जिता हाम्रो नेपाल, हामी नेपालीका अभियन्ता रहेको पुष्टि भएको छ । उल्टै जिताले कारवाही गर्ने भनेर ज्ञानेन्द्रले भनेका छन् । पीडित विद्यार्थी भने अन्यायमा परेको बताइरहेका छन् । यसबारे बुझ्न जिता बराल र ज्ञानेन्द्र शाहीलाई सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि पुल्चोकको आरोग्य प्रतिष्ठान सिल